Hlola i-Abu Dhabi, e-United Arab Emirates% - World Tourism Portal
Hlola i-Abu Dhabi, United Arab Emirates
Yini ongayibona ku-Abu Dhabi. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Abu Dhabi.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Abu Dhabi
Bukela ividiyo ngo-Abu Dhabi
Hlola i-Abu Dhabi inhlokodolobha yombuso kanye nesikhungo sikahulumeni ku I-United Arab Emirates. I-Abu Dhabi idolobha elikhulu kunawo wonke i-Emirate ye-Abu Dhabi futhi elinye lamadolobha anamuhla emhlabeni.
Njengoba kunabantu abangaphansi kwesigidi se-1.5, i-Abu Dhabi iyindlunkulu yezinkampani eziningi zikawoyela namanxusa. Njengoba sinezakhamizi ze-420,000 kuphela kulo lonke olwe-emirate, ngalinye linenani eliphakathi nerandi le-USD17 million! Idolobha linezingadi ezinkulu namapaki, ama-boulevards aluhlaza amise yonke imigwaqo nemigwaqo, izakhiwo eziphakeme kakhulu eziphakeme, amaketanga amahhotela okunethezeka aphesheya kwezindawo ezinkulu kanye nezitolo ezinkulu zezitolo.
Isikhathi eside kubhekwa njengendawo engaphansi kwe-bureaucratic ithoba ngokuphelele kumakhelwane Dubai'I-pizazz, izinto zaqala ukuguquka ngamandla e-2004 ngemuva kokuthi kubuse inkosi uSheart Zared, kwathi uShart Khalifa, indodana yakhe. Emzamweni wokuheha ezokuvakasha kanye nokutshalwa kwezimali, ukuthengiswa komhlaba kubantu bokufika kwavunyelwa futhi nemikhawulo yotshwala yathukululwa.
Eziningana Massive amaphrojekthi nawo ayaqhubeka. I-Yas Island ibamba ithrekhi kaForula 1 ye-Abu Dhabi ne-Ferrari theme park entsha, ngenkathi indawo ezayo yamabhiliyoni ama-USD28 billion amasiko eSaadiyat Island nezindawo zayo eziphakathi kweGuggenheim kanye neLouvre Museum. Kuyabonakala ukuthi leliqhinga lizosebenza kahle kanjani kepha idolobha libhekene nomfutho wokwakha.
Umgogodla we-Abu Dhabi isiqhingi esimise okomugqa esixhunywe ezwenikazi ngamabhuloho aseMaqta naseMusaffah. Ukuphela kobubanzi bokubumba kuyindawo ephakathi nedolobha, kanti iCorniche isebenza ogwini kanye nomgwaqo owaziwa ngeSikhumulo Sezindiza noma i-Sheikh Rasheed bin Saeed al Maktoum St oqonde amabhuloho.
I-Abu Dhabi inesimo sezulu esishisayo sasehlane. Isikhathi esihle sokuvakashela leli dolobha sibizwa ngokuthi “ubusika” kusuka ngoNovemba kuya ku-Mashi okusuka kushushube ngokulingana kuye kofudumele.
I-Abu Dhabi International Airport iyona UAEIsikhumulo sezindiza sesibili esimatasa kakhulu (ngemuva kweDubai) nesizinda sekhaya sika-Etihad ka-Abu Dhabi. Kumenyezelwe ku-2003, i-Etihad Airways ibikhula ngokushesha futhi manje indizela kuwo wonke amazwekazi ahlala e-United Arab Emirates, futhi nezinsizakalo zayo (ikakhulukazi ezindizeni ezindizayo) zihle ngokumangazayo kuwo wonke amakilasi.
I-Abu Dhabi ayinikezeli kangako indlela yokubona umlando noma amasiko kodwa empeleni ayintuli ekuheheheni futhi eziningi zazo zikhululekile.
I-Sheikh Zared Mosque. I-mosque enkulu ye-6th emhlabeni. Kunohambo oluqondisiwe lwangaphakathi izikhathi eziningana ngosuku. Qaphela ukuthi kunekhodi yokugqoka- eqinile kwabesifazane; kuncane kakhulu kubantu besilisa.
ICorniche. Isizinda esimnandi samanzi sika-Abu Dhabi sisuka e6km sisuka eBreakwatre ngaseMarina Shoping Mall cishe saya echwebeni iMina Zayed. Inendlela yokuhamba yonke ubude, futhi izikebhe ezithile zinamabhishi anesihlabathi. Kunemisebenzi eminingi efana nokugibela inqola, izindawo zokudlala ngisho nezigaba zemibukiso. Konke lokhu kuphambana nokwasemuva kwemibhoshongo ehlaba umxhwele yedolobha lase-Abu Dhabi. Woza kusihlwa futhi uzizwe sengathi bonke abantu base-Abu Dhabi bafikile lapha ukuhamba kwabo kusihlwa.
Ifulegi. E-123m, lokhu kuphakathi kwamafulegi amade kunawo wonke emhlabeni, futhi ngeke uphuthelwe ifulege elikhulu le-UAE elilengiswa kulo. Esiqhingini saseMarina ngaphesheya kusuka eMarina Mall.
Igugu Lamagugu. Eduzane neFlagpole. Iqoqo elinesizotha lezinto ezinothuli zokuphamba, izikebhe zamapulangwe zendabuko, nezitolo zezandla. Kodwa-ke, inolwandle oluhle olunombono omuhle wedolobha!
IKhalifa Park, (off Al Salam St (8th) eduzane naseGrand Mosque). Ipaki elihle kakhulu kude, elakhiwe ngentengo yemali engu- $ 50 million. Ine-aquarium yayo, imnyuziyamu, isitimela, amapaki okudlala nezingadi ezihlelekile.
Imicimbi Yamasiko.Isikhungo Samasiko i-Abu Dhabi sesibe umqhele ezweni i-Emirates futhi sigcina imicimbi namasiko unyaka wonke. Inomtapo wolwazi ogcwele kahle, izinhlelo zezingane, imiboniso yezobuciko, izinzuzo, neminye imisebenzi ehlobene namasiko eyimpawu eyingqayizivele yanoma yiliphi idolobha. Kuhle ukubukwa.
ISaadiyat Islandis yathuthukiswa yaba indawo yezamasiko.
I-Yas Island: Umgede we-alpha-male motorsports we-Yas Island ubeka umjaho wezemidlalo wezimoto ezihamba phambili emhlabeni obambe umjaho wokugcina weFomula 1 wesizini se-2009 - i-Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, ipaki yezindikimba zeFerrari, ipaki yamanzi, kanye ne - Yebo - indawo enkulu yezitolo.
Kuyikhaya naseklabhini yegalofu ye-Yas Links, okuyinkambo ye-100 ephezulu yokulinganisa umhlaba.
ILulu Islandsare iqembu leziqhingi ezakhiwe, selivele lakhiwa nje ngasolwandle ngezindleko ezinkulu, kepha njengamanje lihleli laphaya lingenzi lutho ngemuva kokuthi umsebenzi wokuvakasha uhlulekile ngisho nokuqala ukwakha.
I-Reem Islandis isiqhingi esisha esinokuthuthuka okuningi okuqhubekayo nokuhlelwayo. Ingxenye enkulu yesiqhingi ayiphelile.
Cishe wonke amahhotela neziklabhu ezizimele e-Abu Dhabi zinikezela indawo yokubhukuda, imvamisa inhlobo yamabhishi angasese. Ungakhokhela ukusetshenziswa kosuku, noma unyaka. Enye inketho engabizi kakhulu i-The Club, okuyinhlangano ebhekiswe kwabokufika.
IzifundoAmahhotela athile anikela ngezifundo zokudansa, amakilasi we-aerobics, nokunye ukuzijabulisa ngokomzimba.
Ingaphandle Yemvelo. Yize ekuqaleni ubheka ngaphandle kungabonakala kuthambile futhi kungathandisisi futhi kuyingozi ngenxa yezimo zasehlane, empeleni kukhona izindawo zemvelo ezimangazayo emfudeni ye-Abu Dhabi, enwebeka yonke indlela eningizimu eya Empty Quarter nasempumalanga kuya ezintabeni zase-Oman - ubunzima obukhona ukwazi ukuthi ungazitholaphi lezi zindawo ezinhle! Kunezimpophoma zamanzi pristine, imisele eyakhiwe ngamatshe okugcwala, ngisho namachibi anamanzi ahlanzekile - I-Weekenduae yibhulogi elihlanganyela ngokukhululekile imicabango, izindlela nezinhlelo zezikhathi zangempelasonto ngayo yonke imininingwane yohambo kufaka phakathi incazelo, ithrekhi ye-GPS, imephu exhumana nezithombe.
Amapaki. I-Al Safa Park ingelinye elidala kunawo onke e-Abu Dhabi. Yintandokazi yabathandi bezemidlalo, futhi izivakashi eziningi ziyakujabulela ukudlala i-tennis, volleyball, nebhola. Izingane zithanda ukudlala imidlalo ku-arcade yevidiyo, noma ukugibela isondo likaFerris nezimoto ezinkulu. Ipaki inethonya lokudabula kulo. Izindawo ze-Barbeque nezindawo ezinepikiniki zitholakala kulabo abafuna ukwenza usuku lwazo.
Izinhlanga Zamakhamera. ICamel Race Track ingenye yezinto ezingajwayelekile, kanti imijaho ibanjwa ngoLwesine nangoLwesihlanu ebusika. Hhayi nje kuphela ongabukela izinhlanga, kodwa uzothola ithuba lokuvakashela ama-paddocks. Idolobha laseShweihan, engxenyeni esempumalanga ye-Abu Dhabi emirate laziwa kakhulu ngezinhlanga zalo, futhi uLiwa uba nomcimbi waminyaka yonke.
Desert Safarior Dune Bashing. Kubhekise ogwadule kuyi-SUV nge-Special Desert Drivers. Abashayeli bazokuthatha uma ufuna ukugibela i-roller-coaster ongqele izindunduma zesihlabathi, bakukhombise ukushona kwelanga kusuka endaweni ehlelekile yomgwaqo bese bekuyisa esidlweni sakusihlwa ngomculo nomdanso wokuqedela umkhathi. Ungahle uthande ukungabi bikho ekuhlaselweni kwendunduma uma wazi ukuthi ukukhubazeka kalula.
I-Abu Dhabi Dhow Cruiseor izikebhe namaYachts. Ukuhamba ngezinyawo endaweni yaseCorniche ngokudla kwe-Arabhu kwamazwe ase-5 Star. Kuyatholakala nama-Yachts amaningi nezikebhe ezahlukahlukene ezinokukhethwa kokuhamba ngezinyawo ezindaweni ezingafani ze-Abu Dhabi
I-Abu Dhabi Classics Run - Beat Beethoven (Septhemba 29th - Oct 1st 2010; Corniche Beach, Abu Dhabi) Charity umcimbi, uya emfundweni yomculo nezinhlelo zokuvikela isifo sikashukela.
IHelopter TourBoard i-6-seater Eurocopter EC130 B4 kanokusho kanye ne-Discover Abu Dhabi ngokubuka kwamehlo ezinyoni nge-Falcon Aviation Services. Uhambo lusebenza nsuku zonke ukusuka ku-9AM luye kwi-5PM ukuphuma eMarina Mall Terminal. Kunconywe ukubhuka (izinkambo zingabhukelwa umuntu ngamunye noma ngasese)
U-Abu Dhabi uyiphupho lezitolo elicindezelayo. Kunezitolo ezinkulu eziningi, eziningi zazo ezinezitolo ezifanayo njengezinye ezitolo ezinkulu. Ngaphandle kwezindawo ezibhekiswe kwabasendaweni, izindawo ezinkulu kuzo kubandakanya nezitolo ezithandwayo zangaphandle, kanye nezindawo zabakhiqizi. Abavakashi abaningi bazomangala nge-dichotomy yabesifazane besifazane - ngenkathi isiko lasendaweni lifuna ukuthi abantu besifazane bambozwe emphakathini, izitolo eziningi zithengisa iziketi ezimfushane neziqeshana zamahhafu eceleni kweziketi ezinde ezinobude bendawo kanye namahembe amade.
Isizini ephelele yezaphulelo - ukuphela konyaka naphakathi nonyaka. Lesi yisikhathi lapho ungathola khona izinto ezifakwe uphawu ngentengo ephansi kakhulu, mhlawumbe ngesizini edlule yesitoko.
Yize u-Abu Dhabi ehlangana ezinhlobonhlobo zamalolo nobuhlanga, akukho okuhlukahlukene uma kukhulunywa ngokudla. Ukudla kwaseNdiya kushibhile, futhi kukhona izindawo zokudlela ezimbalwa zamaShayina ngamanani afanele. Izindawo zokudlela zehhotela zivame ukubiza kakhulu. Idolobha likhaya lazo zonke izinhlobo zokudla okusheshayo okufana nokukaMcDonald's noHardees, kodwa kunokubiza okuningana kwabantu abaningi ukuba badle kulezo zindawo.
Into emnandi nge-Abu Dhabi ukuthi yonke indawo, ukusuka emijondolo emincane yama-falafel kuya ezindaweni zokudlela zamahhotela ezi-cushy kuya eBurger King, ehambisa noma kuphi edolobheni. Ukulethwa kuyashesha futhi kuyathembeka, futhi ngokuvamile akubizi okungeziwe.
Abasebenza ngemifino bazothola ukukhethwa kwedolobha lokudla okwanelisa kakhulu. Izitsha zendabuko ezinemifino nezinobhontshisi osindayo, uhlu lwezidlo zaseNdiya ezihlanzekile zemifino, kanye nokutholakala okuhle kwama-saladi amasha kwenza ukudla e-Abu Dhabi kube yinto engacindezeli. Ama-vegans aqinile angaba nobunzima obuncane bokutshela izidingo zawo eziqondile, kepha izindawo eziningi zinikeza izitsha ze-vegan futhi zizimisele njalo ukuhlalisa ikhasimende elikhokhelayo. Ukukhetha okuhle kwama-Vegans ahlanzekile kungaba ngesinye sezindawo zokudlela eziningi zama-Indian veg njenge-Evergreen, Sangeetha endaweni ye-Tourist Club.
Izivakashi kufanele ngaso sonke isikhathi zibheke ikhalenda lamaSulumane ukuthola ukuthi bazobe bevakasha nini ngenyanga yeRamadan. Njengoba amaSulumane eshesha phakathi nesikhathi semini, izindawo zokudlela, ngomthetho, zivaliwe phakathi nosuku. Kuphinde futhi kube nomthetho ukudla noma ukuphuza noma yini, ngisho namanzi, esidlangalaleni kanye nezivakashi (nezakhamizi ezingezona ezingamaSulumane) ziye zaboshwa zanikwa inhlawulo. Amahhotela amakhulu ngokuvamile anendawo yokudlela eyodwa evulekile phakathi nosuku ukuze adle okungewona amaSulumane ukudla. Kusihlwa, noma kunjalo, kuyindaba ehlukile impela, njengoba kuyisimo semikhosi iftar (ukwephula ukudla okusheshayo) kuyaqala futhi izakhamizi zihlangane ukudla okumnandi, njengokubonga. Uma nje ungafuni ukuzithela ngasese, ukudla kwakusihlwa kuhle kakhulu.
Izindawo zokudlela kuphela ezikhona emahhotela ezivunyelwe ukuhambisa utshwala. Ngakho-ke, konke ukuhamba ebusuku kuhlotshaniswa namahhotela. Isikhathi sokuphuza yi-21, kepha izindawo eziningi azinandaba. Ngokungafani nezinye izizwe zaseMiddle East, imigoqo e-Abu Dhabi izokwazi ukuthwala ama-oda amaningi esiphuzo.
Zizwe ukhululekile ukuhlola i-Abu Dhabi ..